व्यावसायिक लिची खेतीतर्फ किसान आकर्षित - Nepal Japan
नेपाली समय : 01:27:26
जापानी समय : 04:42:26
व्यावसायिक लिची खेतीतर्फ किसान आकर्षित
25 June, 2019 16:25 | जन सरोकार | comments | 10200 Views
व्यावसायिक लिची खेतीतर्फ किसान आकर्षित बनेका छन् । लिची खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल बनेपछि पाल्पा रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीका किसान अहिले लिची खेतीप्रति थप आकर्षित बन्दै गएका हुन ।
स्थानीयस्तरबाट प्रतिकिलो लिचीलाई रु ६० मा खरीद बिक्री हुँदै आएको छ ।रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीबाट मात्र यस आवमा रु २६ लाखको लिची गाउँबाट बाहिर निकासी भएको छ । गाउँमा उत्पादित लिची पाल्पाका स्थानीय बजारदेखि पोखरा, बुटवल क्षेत्रमा बढी खपत हुने व्यवसायी दिनेश अर्यालले बताउनुभयो ।
गाउँमा उत्पादित लिची रु ५० हजारदेखि चार लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । स्थानीय बासिन्दा अर्जुनदेव पन्त, गङ्गा पछाईलगायतका युवाले गाउँमा लिची खेतीबाट यो वर्ष मात्र रु चार लाख आम्दानी हाता पार्न सफल हुनुभयो । उहाँहरु मात्र होइन, ४० देखि ५० घर परिवारले रु ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी लिनुहुन्छ ।
पाल्पाको हुँगीको लिची नेपालकै सबैभन्दा स्वादिलो हुन्छ । लिचीभित्रका दाना साना, बोक्रा पातलो र लिचीको भाग बढी हुँदा पाल्पाको लिची राम्रो मानिएको स्थानीय बासिन्दा यमबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । लिची रोपेको दुई वर्षमा उत्पादन दिने गर्छ । मल, पानी राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेको अवस्थामा पाँच वर्षको अवधिमा एउटा रुखबाट वार्षिक रु १० हजार आम्दानी दिने किसानको भनाइ छ । किसानले खेतबारीका कान्लामा उत्पादित लिची चिस्यान केन्द्रको अभावमा काँचो अवस्थामा बेच्न बाध्य हुनुपरेको गुनासा छन् ।
चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न सकेको अवस्था लिची टिपेर भण्डार गर्न सकिन्छ । भण्डार गरेका लिची आवश्यकअनुसार बजारमा पठाउन सकेको अवस्थामा किसानलाई राम्रो आम्दानी हुने देखिन्छ । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीका अनुसार लिची खेतीलाई थप प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले नीति नै बनाउन लागेको छ । भण्डारीले भन्नुभयो, “व्यावसायिक किसानलाई ८० प्रतिशत गाउँपालिनको अनुदान र २० प्रतिशत किसानको सहयोगमा २० हजार बिरुवा वितरण गर्ने तयारीमा रहेका छौँ ।”
जसले फलफूल खेती नै गरेको छैन, तिनीहरुका लागि निःशुल्क लिची, कागती, सुन्तला वितरण गरी व्यावसायिक फलफूल खेती गरी आम्दानी लिन सक्ने छन् । गाउँपालिकाले आगामी आवमा लिची पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको छ । लिची पकेट क्षेत्रमा एक घर एक लिची कार्यक्रम, सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रमा एक घर एक सुन्तलाका बिरुवा रोप्नुपर्ने नीति ल्याउने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
कालीगण्डकी नदीसँग जोडिएको हुँगी पाल्पाकै सबैभन्दा गर्मी क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा आप, कटरलाई व्यावसायिक खेती गरी राम्रो लाभ लिन सकिने देखिए पनि त्यस व्यवसायतर्फ युवाको आकर्षण बढेको छैन । आँप फलेर पाक्नभन्दा अघि नै झर्ने र कटरको ढुवानीमा समस्या हुँदा बजार पाउन सकेको छैन । कटर गाडीमा लैजान हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यताका कारण ढुवानी गर्न नमान्ने गर्छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव : स्याउ फल्ने ठाउँमा आँप फल्न थाल्यो
नक्कली ब्लुबुक र चोरीको मोटरसाइकलसहित चार जना पक्राउ
नेपालको पहिलो ‘नेटवर्क आर्क पुल’को निर्माण अन्तिम चरणमा (भिडियोसहित)
मासिक २० रुपैयाँ जम्मा गरेर सामाजिक कार्य
नदी नियन्त्रण आयोजनाका तीन इञ्जिनीयर पन्ध्र लाख घुससहित पक्राउ
रौतहटमा खाल्डोमा डुबेर दुई बालिका र तनहुँमा पौडी खेल्दा एक बालकको मृत्यु
रोकिराखेको टिपर स्कुटर ठोक्किँदा एकजनाको मृत्यु
किशोरी बन्धक बनाउने भारतीय नागरिक पक्राउ
पाँच हजार २० मिटर उचाइमा अवस्थित मुस्ताङको थोरङलामा हक्की खेलेर नेपालमा विश्व कीर्तिमान
एनिमेशन स्टुडियोमा आगलागी : संदिग्ध व्यक्ति केही दिन अघिदेखि ‘देखिएका थिए’
चापागाउँमा प्रभु बैंकको १८८औँ शाखा
पुलिसलाई पराजित गर्दै ब्रिग्रेड ब्वाइजले जित्यो ललित स्मृति यू–१८ फुटबलको उपाधि
दुई छिमेकी देशमा अशान्त हुँदा ‘तपाईं ढुक्कले निदाउन सक्नुहुन्न’ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
जापानको माथिल्लो सदनका लागि मतदान सम्पन्न : मतपरिणाम सोमबार बिहान सार्वजनिक हुने
गाजरे झारको मिचाइमा औषधीय वनस्पति तितेपाती, मानिसमा समेत असर
कृषि केन्द्र निर्माणले ग्रामीण क्षेत्रको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने
नेकपाले टुंग्यायो ७७ जिल्ला र ६ वटा महानगरको इञ्चार्ज-सहइञ्चार्ज
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा महीनामा एक पटक कलेजो प्रत्यारोपण- विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिने लक्ष्य
साउन १६ गतेदेखि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रशिक्षण
प्रियङ्का गान्धी जेल जान तयार
नागढुङ्गाबाट दुई किलो सुनसहित सहित १७ वर्षीया युवक पक्राउ
साझा पार्टीमा विशिष्ठ महिलाहरुसहित सातजना केन्द्रीय सदस्य थप
रोनाल्डोले प्रेमिकालाई छोड्नुको कारण यस्तो !
सरकार जनता कति सुखी र खुसी छन् थाहा छ ?
देश भित्रै छ्यापछयाप्ति जयशंकरहरु छन्, उनीहरुलाई सच्याऔ । दिल्लीका जयशंकरको धेरै चिन्ता गर्नै पर्दैन् !
सडकमा बत्ती बल्दैन, कर तिर्न लाइन बस्नुपर्छ, ६ महिना कुर्दा एउटा लाइसेन्स बन्दैन। सडक धुलाम्मे छ। छोराछोरी पढाउन नसकिने शुल्क छन्। बेथिती कहाँ छैन? तर नेकपा सरकारले सँधै एउटै उपलब्धि देखाउँछ - वृद्धभत्ता बढ्यो। यो भिडिओ नेकपालाई चुनावका बेलामा काम लाग्छ भनेर ट्विट गरिदिएको।
एनआरएनमा यसअघि अघोषित रूपमा थियाे, यसपाली त घोषितरूपमा प्रजातान्तिक र प्रगतिशिल पक्षधर प्यानल भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका रहेछन् अमेरिकादेखि अष्ट्रेलियासम्मका गैर आवासिय नेपालीहरू। सामुदायिक वनदेखि एनआरएनसम्म दलिय राजनितिले नछाेड्ने भयाे ।
उत्तम बाबु श्रेष्ठ
नयाँबर्षको बजेट पुरानै निरन्तरतामा देखियो; केही पपुलिष्ट कुरा र केही कस्मेटिक सुधारका कुरा बाहेक!यत्तिकैमा भित्री/बाहिरी लगानीमा कसरी गुणात्मक वृद्धि होला?त्यो विना अपेक्षित वृद्धि र रोजगारी सिर्जना कसरी होला?पुराना काम दोहोर्याइरहनु र फरक परिणाम खोज्नु पागलपन हो भन्थे आइन्सटाइन!